Eto ianao : Home>Product>Birao voajanahary GRG
Panel akustika GRG
Model Number: Tontonana akustika GRC
GRG dia manaraka ny fitsipiky ny fanaovana hoditra manjavozavo fa tsy matevina. Bionic rate + onjam-pandefasana feo + tahan'ny fanamafisam-peo = 1, hahatratrarana ny vokatr'akanjoko ho an'ny fanamafisam-peo fanamafisana feo.
1. Tsy misy fiovana
Satria ny gypsum lehibe indrindra amin'ny GRG dia tsy misy fiatraikany amin'ny fibre vera, ary ny tahan'ny fandriam-panala mando dia ambany noho ny 0.01%, ny vokatra dia azo antoka fa hanana fampisehoana maharitra, faharetana, tsy misy famoretana, tsy misy fiovana ary tsy maha ela ny fiainam-panompoana.
2. Mavesatra maivana
Ny hatevin'ny fenitry ny vokatra GRG dia 3.2 ka hatramin'ny 8.8MM (azo atao matevina amin'ny fepetra takiana manokana), ary ny lanjan'ny metatra toradroa dia 4.9 ka hatramin'ny 9.8KG, izay mety hampihena ny lanjan'ny trano lehibe sy ny vesatra amin'ny singa.
3. Hery lehibe
Ny fanandramana dia mampiseho fa ny vesatry ny vokatra GRG dia mihoatra ny 1200N, izay avo 10 heny noho ny entana matevina an'ny 118N an'ny JC / T799-1998 (1996) birao gypsum haingon-trano.
Lovia GRG dia lovia misy micropores maro be. Ao amin'ny tontolo voajanahary dia afaka mandoto na mamoaka rano ny vatana mousla. Rehefa avo ny hafanana anatiny ary ambany ny hamandoana dia mamoaka tsikelikely ny hamandoana ao amin'ny micropores ny birao; Rehefa ambany ny mari-pana ao anaty ary ambany ny hamandoana, dia hitsentsina ny hamandoana ao anaty rivotra. Ity famoahana sy fifohana rivotra ity dia manome ny fiantraikany "ny fofonaina". Ity fiovan'ny fihodinana amin'ny famoahana ny hamandoana sy famotsorana ity dia mitana anjara toerana amin'ny fanitsiana ny mari-pana simba anaty ao anaty ary mamorona mikraoba tsara ahafahana miasa sy miaina.
5. fisorohana ny afo
Ny fitaovan'ny GRG dia an'ny fitaovam-piadiana Class A. Rehefa misy afo dia tsy vitan'ny famoahan-jiro ihany ny fitaovana GRG, fa mamoaka 15% hatramin'ny 20% amin'ny lanjan'ny rano ihany koa, izay afaka mampihena ny mari-pana amin'ny alàlan'ny famonoana ary mampihena ny fatiantoka afo.
6. Fiarovana ny tontolo iainana
Ny akora GRG dia tsy misy fofona, ary ny fetran'ny radionuclide dia mifanaraka amin'ny fenon'ny Class A hiasan-dry zareo voafaritra ao amin'ny GB6566-2001. Ary tafiditra amin'ireo fitaovana maitso sy mahafinaritra.
7. fiantraikany tsara
Ny valin'ny fitsapana dia mampiseho fa ny akora GRG misy haben'ny 4MM dia miditra ao amin'ny 500 Hz 23 d 100 Hz 27 db. Ny gravity manokana an'ny rivotra dia maina 1.75, izay mahafeno ny fepetra takian'ny matihanina acoustic matihanina. Amin'ny alàlan'ny famolavolana modely tsara, dia azo atao ny mandrafitra ny famindrana feo tsara mba hahatratrarana ny fitrandrahana feo sy ny fidiran'ny feo.
8. Dingana fanodinana fohy
Maharitra 30 minitra fotsiny ny fotoanan'ny vokatra GRG ary maharitra 4 ora fotsiny ny fotoanan'ny fanamainana. Noho izany, ny fotoana fanamboarana dia azo ferana haingana.
9. Fananganana mora
Ny GRG dia azo alavina araka ny tokony ho izy araka ny volavolan'ilay mpanaingo, ary azo alavina ary zaraina amin'ny sakana lehibe. Tsara ny fampandehanana any an-toerana dia tsara, fametrahana haingana sy haingam-pandeha, ary ny fivoriam-be any amin'ny faritra lehibe dia azo tanterahina mba hamolavolana endrika feno. Indrindra ho an'ny lavaka, arc, zoro ary hevitra tsara hafa, dia afaka miantoka fa tsy misy lesoka.
10. Ny velaran'ny lamba dia malefaka sy malefaka.
Mahatratra mihoatra ny 85% ny fotsifotsy, ary afaka mamatotra tsara miaraka amin'ny palitao sy ny haingon-trano vita amin'ny haingon-trano mba ho vokarina tsara ny haingo.
GRC Alain-tahaka ny hazo
Copyright © 2020 Nanjing BeiLiDa New Materials System Engineering Co, Ltd.